၂၂ချပ်မြောက်တားရော့ကဒ် (၂၂ခပျြမွောကျတားရော့ကဒျ) | linyeikhtin
ပူပြင်းလွန်းလှသောမြေပြင်ထက်တွင်တော့ ကျောက်တင်းပုတ်ကြီးတစ်ခု ကိုင်စွဲလာသော ကျောက်ခေတ်လူသားတစ်ယောက်…။
မောပန်းလွန်းသဖြင့် သစ်ပင်အရိပ်အောက်တွင်သူထိုင်ချလိုက်သည်။ ဒီနေ့မှ သားကောင် ကလည်းမရ။ ဗိုက်ကလဲ တကျုတ်ကျုတ်နှင့်ဆာလှလေပြီ။
ဗိုက်ဆာဆာနှင့် ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်နေစဉ် သူ့စိတ်အစဉ်ကို အရာဝတ္ထုတစ်ခုက ဖမ်းစား လိုက်သည်။
စိတ်ဝင်တစားနှင့်သွားကိုင်ကြည့်သည်။ အသားကတော့ သူတို့ကိုင်စွဲသည့် လက်နက်များ လိုပင်မာသည်။ နေပူထဲမှာမို့ပူကျွတ်နေသည်။ မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်ပါပြီး နှစ်ဖက်လုံးတွင် ဘာအရေး အကြောင်းမှရှိမနေ။ ပကတိပြောင်ချောနေပြီး ပြင်ညီဖြစ်နေသည်။
သို့သော်သူထွေထွေထူးထူးစဉ်းစားမနေနိုင်။ နိုးကတည်းက ဘာတစ်ခုမှမစားရသေးသဖြင့် ရရာကိုပဲစားတော့မည်ဟု သူဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ထို့နောက် သူဗိုက်ဆာဆာနှင့်ကိုက်လိုက်သည်။ မရ။ အသားကမာလွန်းသည်။ စိတ်ညစ် ညစ်နှင့် ဘေးဘီဝေ့ကြည့်တော့ သူ့လက်စွဲတော်တင်းပုတ်ကိုတွေ့သွားသည်။
သူအဓိပ္ပါယ်ပါပါတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီး သူ့တင်းပုတ်ကြီးကိုမကာ ထိုပြားပြားကောင်ကို အား နှင့်မာန်နှင့်ထုချလိုက်သည်။ အရှိန်ကအတော်ပြင်းသည်မို့ သစ်ပင်ပေါ်ကအသီးများတောင်ကြွေကျလာ သည်။
စိတ်ထဲတွင်လည်း မင်းဘာတတ်နိုင်သေးလဲဟု ကြုံးဝါးမိလိုက်သည်။ အားရကျေနပ်စွာနှင့် အောက်ကိုငုံ့ကြည့်မိတော့ အထင်နှင့်အမြင်ကလွဲချေသည်။ ထိုပြားပြားကောင်ကဘာမှမဖြစ်။ အက်ရုံ လေးသာအက်သည်။
သူစဉ်းစားမရဖြစ်သွားသည်။ ယခင်ကဆို သူ့တင်းပုတ်နှင့်ထုလိုက်လျှင် သားကောင်တွေ အကုန်လုံးသေကြသည်။ အခုဒီကောင်ကျမှ သူ့တင်းပုတ်ကိုမဖြုံဆိုတော့ သူစဉ်းစားမရဖြစ်နေသည်။
ဤမျှထူးဆန်းလှသော ထိုပြားပြားကောင်ကို သူအသေအချာကိုင်ကြည့်သည်။ ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်း သူအတွေးတစ်ခုရလာသည်။ တင်းပုတ်နှင့်မရလျှင် စူးနှင့်ထိုးမည်။
ထိုအတွေးရရခြင်း သူအလျင်အမြန်ပဲ အကောင်အထည်ဖော်သည်။ ကျောက်စူးတစ်ခုကို ယူပြီး ထိုပြားပြားကောင်ကိုထိုးစိုက်လိုက်သည်။
သူဒေါသထွက်ထွက်ဖြင့် ထိုပြားပြားကောင်ကို စူးနှင့်ခြစ်သည်။ ပြားပြားကောင်ကိုယ်ပေါ် တွင် ခြစ်ရာများဗလပွဖြစ်သွားသည်။ နောက်ဆုံး ခြစ်ရုံတင်အားမရတော့သဖြင့် ပါးစပ်နှင့်ကိုက်သည်။ အားရပါးရကိုက်သည်။ ပါးစပ်ကလည်း “တဂူးဂူး၊တဂဲဂဲ” အသံများထွက်နေသည်။
ထိုစဉ်…။ ဒေါက်ခနဲအသံတစ်ခုကြားလိုက်ပြီး သူ့ပါးစပ်တွင်းတစ်နေရာက ပူခနဲခံစားလိုက် ရသည်။ ပါးစပ်တွင်းမှ သွေးများစိမ့်ထွက်လာသည်။
နောက်ဆုံးတော့ သူလက်လျှော့လိုက်သည်။ ခြစ်ရာများ၊ ကိုက်ရာများ၊ အက်ရာများဗလပွ ဖြစ်နေသည့် ထိုကျောက်ပြားဝိုင်းလေးကို မြေကြီးပေါ်တွင်ပစ်ချထားခဲ့သည်။
✴✴✴✴✴ ✴✴✴✴✴ ✴✴✴✴✴ ✴✴✴✴✴
ခရစ်နှစ်၃၀၁၅၊ အောက်တိုဘာလ ၁၁ရက်…။
ဘာမန်နိုင်ငံ၏ သမ္မတအိမ်တော်တွင် လျှို့ဝှက်အစည်းအဝေးတစ်ခု ကျင်းပနေကြသည်။
“အခုလိုမျိုး ကျွန်တော်တို့လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံရခြင်းကတော့ သုတဘဏ္ဍာတိုက်တစ်ခုအဖြစ် တစ်ကမ္ဘာလုံးကသတ်မှတ်ပြီး အသည်းအသန်လိုချင်နေကြတဲ့ဆယ်လ်မန်ဟာ အခုဆိုကျုပ်တို့နိုင်ငံထဲ မှာရှိနေပြီဆိုတာ ပြောဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်”
“ဗျာ…အဲ့…အဲဒါ တစ်ကယ်ပဲလား သမ္မတကြီး”
“ဟုတ်ပါတယ်…။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိက ဆက်လက်တင်ပြပါ လိမ့်မယ်”‘
သမ္မတကြီးစကားဆုံသွားချိန်မှာတော့ စားပွဲခုံ၏ထောင့်စွန်းတွင်ထိုင်နေသည့် လူတစ်ဦးက မတ်တပ်ထရပ်ပြီး သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်သည်။
“အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ သမ္မတကြီးပြောသွားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေး အ ရာရှိပါ။
ဒီဆယ်လ်မန်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပါတ်လောက်တည်းက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲ ရောက်နေခဲ့ တာလို့ ခန့်မှန်းမိပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းရဲ့ အကြမ်းဖျင်းဈေးကတော့ ဘာမန်ဒေါ်လာဘီလီယံ၁၀၀၀လို့ သိ ရပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းဟာ အလွန်ကိုအရေးကြီးတာမို့ ကျွန်တော့်လက်အောက်က အယုံကြည်ရဆုံးနဲ့ အတော်ဆုံးတပ်ဖွဲ့ကို ဒီပစ္စည်းယူဖို့အတွက် တာဝန်ပေးထားပါတယ်”
အရာရှိစကားဆုံးသွားချိန်မှာတော့ အစည်းအဝေးပွဲသို့တက်ရောက်လာကြသည့် ပညာရှင် များအားလုံးက လက်ခုပ်ဝိုင်းတီးကြသည်။
လက်ခုပ်သံစဲမှ သမ္မတက စကားဆက်ပြောသည်။
“ကဲ…အခုဆို ဒီပစ္စည်းဟာ ကျွန်တော်တို့လက်ထဲရောက်ပြီလို့ တစ်ဝက်တော့ပြောလို့ရပြီ ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဒီပစ္စည်းအကြောင်းကို ဂဃနဏပိုသိချင်တာမို့ ပညာရှင်များက ကိုယ်သန်ရာသန် ရာ ရှင်းပြကြပါခင်ဗျာ”
“ဟုတ်ကဲ့ပါသမ္မတခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ရှေးဟောင်းသုတေသနနယ်ပယ်မှာ ဒီပစ္စည်းရေ ပန်းစားရခြင်းကတော့ ဒီပစ္စည်းပေါ်က အမှတ်အသားတွေဟာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရတနာသိုက်ဆီ သွားဖို့ သဲလွန်စပေးထားတဲ့ မြေပုံတစ်ခုလို့ပညာရှင်တွေယူဆကြလို့ပါခင်ဗျ။ အမှတ်အသားတွေထဲ မှာလည်း သစ်ပင်တွေ၊ စမ်းချောင်းတွေ၊ တောင်စဉ်တွေပါဝင်နေပါတယ်။”
သူလေ့လာမိသမျှပြောပြအပြီးမှာတော့ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင် ထိုင်သွားသည်။
“ဒီပစ္စည်းဟာ ဒြပ်စင်အသစ်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်တစ်ခုလို့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ယူဆပါတယ်။ ရိုးရာအခေါ်အဝေါ်အရတော့ ရွှေဖြစ်ငွေဖြစ်ဓာတ်လုံးဖန်တီးဖို့ပေါ့ လေ။”
“ခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့နျူကလီးယားနည်းပညာဟာ လုံးဝပြည့်စုံတဲ့အဆင့် မဟုတ်သေးပါဘူးသမ္မတခင်ဗျား……။ ဒါပေမယ့် ဒီပစ္စည်းအပေါ်က လမ်းညွှန်ချက်လို့ယူဆရတာတွေနဲ့ ချိန်ထိုးပြီးဖန်တီးနိုင်ရင်တော့ နျူကလီးယားမျိုးဆက်သစ်တစ်မျိုးကို ကျွန်တော်တို့တတွေ ဖန်တီးနိုင်ကြ မှာပါ”
“ဒီဆယ်လ်မန်ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းပေါ်က သင်္ကေတတွေဟာ သာမန်မဟုတ်ပဲ လူတွေနဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ ဘာသာစကားကိုရေးထွင်းထားတယ်လို့ ကျွန်တော် တို့ကတော့ ထင်ပါတယ်”
ပညာရှင်အားလုံး ၄င်းတို့၏ထင်မြင်ချက်များကို ထုတ်ဖော်ပြီးသွားချိန်မှာတော့ သမ္မတက အစည်းအဝေးကို ရုတ်သိမ်းလိုက်လေသည်။
ခရစ်နှစ်၃၀၁၅၊ အောက်တိုဘာလ ၁၃ရက်…။
ဘာမန်နိုင်ငံရှိ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Apexဟိုတယ်၏ အခန်းနံပါတ်၃၁၃…။
မျက်နှာပေါ်တွင် ပါးသိုင်းမွှေးများထူထပ်စွာပေါက်နေသည့်လူတစ်ဦး ကျေနပ်အားရစွာပြုံး နေသည်။ ကျဉ်းမြောင်းလှသော မျက်လုံးအစုံကတော့ သူသည်သွေးအေးရက်စက်သူတစ်ဦးဖြစ်သည် ဟု အတိအကျဝန်ခံနေကြသည်။
“ဒီလောကမှာ ဦးသူစားကြေးပဲကွ။ အခု ငါဦးသွားပြီမို့ ငါစားအလှည့်ပေါ့သူငယ်ချင်းရာ”
ထိုသူကောက်ကျစ်စွာပြုံးရင်း သွေးအိုင်ထဲတွင် လဲကျသေဆုံးနေသည့် သူ့သူငယ်ချင်းကို ပြောလိုက်သည်။
တစ်ဆက်တည်းမှာပင် သူ့ညာဖက်လက်တွင်ကိုင်ထားသည့် အထုပ်တစ်ထုပ်ကို အားရစွာ ကြည့်လိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲမှလှည့်ထွက်လာခဲ့သည်။
“ကျွန်တော် ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းပါ။ အကို့အခန်းကို နည်းနည်းစစ်ဆေးစရာလေးရှိလို့ပါ။”
ဘယ်လိုပဲဟိုတယ်ဝန်ထမ်းလို့ပြောပေမယ့် သူယုံကြည်မှုမရှိ။ အရင်ဆုံးreceptionကိုတော့ လှမ်းမေးရမည်။
“ကျွန်တော်က အခန်းနံပါတ်၃၁၃ကပါ။ တစ်ခုခုစစ်ဆေးဖို့များ ကျွန်တော့်အခန်းဆီကို လူလွှတ်ထားသလားသိချင်လို့ပါ။”
“ဟုတ်ကဲ့ပါလူကြီးမင်းရှင့်။ အရေးပေါ်မီးငြှိမ်းစနစ်အတွက် လူကြီးမင်းအခန်းကိုစစ်ဆေးဖို့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးလွှတ်ထားပါတယ်ရှင်။ ဒီအတွက်ကြောင့် လူကြီမင်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွား…”
သူreceptionကပြောသောစကားတောင် ဆုံးအောင်မစောင့်တော့ပဲ ဖုန်းချပစ်လိုက်သည်။ ဘာပဲပြောပြော သူ့ရန်သူတွေမဟုတ်သည့်အတွက် စိတ်တော့ပေါ့သွားလေသည်။
သူအကြောင်းပြန်လိုက်သဖြင့် ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းဆိုသူက သူ့အခန်းထဲသို့ဝင်လာသည်။
ထိုသူက တံခါးကိုအသာအယာစေ့ပိတ်လိုက်ပြီး ဒီဖက်ပြန်အလှည့်တွင်တော့ အသံတိတ် ကိရိယာ တပ်ထားသည့် ပစ္စတိုတစ်လက်က လက်ထဲပါလာပြီး ပါးသိုင်းမွှေးနှင့်လူကိုချိန်လိုက်သည်။
သေနတ်နှင့်ချိန်ထားတာတွေ့တော့ ပါးသိုင်းမွှေးနှင့်လူ အတော်ကိုတုန်လှုပ်သွားသည်။
“မင်း…မင်း ဘယ်သူလဲ။ ဟို… ဟို… ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းဆို”
“ကျွန်တော်လဲခင်ဗျားလိုပါပဲ။ ဆယ်လ်မန်နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့သူပေါ့။ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်း ကတော့ အိမ်သာထဲမှာ ကျွန်တော်သိပ်ထားခဲ့ပါတယ်”
သွေးအေးတည်ငြိမ်သော ထိုသူ၏စကားများအောက်တွင် ပါးသိုင်းမွှေးနှင့်လူ အတော့်ကို ခြောက်ခြားနေလေသည်။
“ကဲ…အချိန်မရှိဘူးဗျာ။ ခင်ဗျားလက်ထဲကဆယ်လ်မန် ကျွန်တော့်ကိုပေးတော့”
ထိုစကားကြားတော့ နဂိုကထက် သူပိုတုန်လှုပ်သွားသည်။ ဒေါ်လာဘီလီယံချီတန်သည့် အတွက် သူ့သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးကိုတောင် သတ်ပြီးယူထားခဲ့သည့်အရာကို ယခုလိုမျိုး တစ်ပါးသူ၏ လက်ထဲ လွှဲပေးရမည်ဆိုတော့ သူနှမြောလှသည်။
သို့သော် အသက်ကတော့ ပိုအဖိုးတန်သဖြင့် မပေးချင်ပေးချင်နှင့်ပေးလိုက်သည်။
ဆဲလ်မန်ဆိုသည့်အရာကို သူဖွင့်ဖောက်ကြည့်သည်။ အစစ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာသည်နှင့် သူတစ်ချက်ပြုံးရင်း ပါးသိုင်းမွှေးနှင့်လူကိုပြောသည်။
“ခင်ဗျားကကျွန်တော့်ကို ဒီလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကလည်းခင်ဗျားကို လက်ဆောင်တစ်ခုပြန်ပေးရမှာပေါ့။
သူလက်ညှိုးလေးကိုနှစ်ခါလောက်ကွေးလိုက်သည်။ ဒုတ်ဆိုသည့်အသံကလဲ နှစ်ချက်မည် သွားသည်။ ပါးသိုင်းမွှေးနှင့်လူ၏ရင်ဘတ်တွင်တော့ လက်ဆောင်ရထားသည့် ကျည်ဖူးနှစ်ခု…။
ဟိုတယ်ထဲမှထွက်လိုက်သည်နှင့် အချိန်းအချက်လုပ်ထားသည့်အတိုင်း သူ့သူငယ်ချင်း၏ ကားလေးရောက်လာသည်။
ကားထဲရောက်ရောက်ချင်း လှမ်းမေးသည့်သူငယ်ချင်းကိုပြုံးပြရင်း လက်ထဲကဆယ်လ်မန် ကို သူတွေ့အောင်မြောက်ပြလိုက်သည်။
ကျယ်လောင်လှသည့်ရယ်သံများကိုသယ်ဆောင်ပြီး ပြိုင်ကားလေးတစ်စီး ဟိုတယ်Apexမှ ထွက်ခွာသွားလေသည်။
အရှိန်အနည်းငယ်တင်ပြီးမောင်းလာသော သူတို့ပြိုင်ကားကို အရှိန်လျှော့ချလိုက်ရသည်။
မလျှော့ချ၍မရ။ ရှေ့နားမှာကားတိုက်မှုဖြစ်သဖြင့် လမ်းပိတ်နေသည်။ ဟိုးခပ်လှမ်းလှမ်းက ယာဉ်ထိန်းရဲတစ်ဦးကတော့ ကားသမားနှစ်ဦးကို တတ်နိုင်သလောက်ဖြေရှင်းပေးနေသည်။
ကားစက်ကို လုံးဝသတ်လိုက်သည်။ လမ်းကလဲ ကျော်တက်ဖို့အဆင်မပြေသဖြင့် သူတို့ ရှင်းပြီးသည့်အထိသာစောင့်ရတော့မည်။
ထိုအခိုက် ကားမှန်ကွဲသွားပြီး သူငယ်ချင်းဖြစ်သူဇက်ကျိုးကျသွားသည်။
ရုတ်တရက်မို့ ဘာဖြစ်မှန်းမသိသဖြင့် သူငယ်ချင်းဖက်သို့အလှည့်။ သူ့ဖက်အခြမ်းက ကား မှန်ထပ်ကွဲသွားသည်။ လည်ပင်းတွင်လည်းပူခနဲခံစားလိုက်ရပြီး သွေးများကဒလဟောထွက်လာသည်။
ရန်သူတွေမှန်း သူနောက်ကျစွာသိလိုက်သည်။ နောက်ဆုံးသိလိုက်ရသည်ကတော့ သူတို့ ရှိရာသို့ ပြုံးပြီးလျှောက်လာသည့် ယာဉ်ထိန်းရဲနှင့်ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်သူနှစ်ဦး…။
“ကဲ…တို့တွေဒီစစ်ဆင်ရေးတော့အောင်ပြီ။ ပစ္စည်းကိုအပ်ပြီး ရာထူးတက်ဖို့ပဲ စောင့်နေရ တော့မယ်”
ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူက သူဝတ်ခဲ့သည့် ယာဉ်ထိန်းရဲအကျီကိုချွတ်ပြီး သူ့အကျီကိုပြန်ဝတ် နေရင်းပြောသည်။
“ငါနဲ့အတူတူစစ်ဆင်ရေးမှာပါဝင်ပြီး ဟန်ဆောင်ရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်၂ယောက်နဲ့ တိုက်၁လုံး စီပေါ်ကနေ တာဝန်ကျေခဲ့ကြတဲ့ စနိုက်ပါရဲဘော်၂ယောက်တို့အတွက် CHEER!!!”
ခွက်ချင်းတိုက်သံများဆူညံသွားပြီး လက်ထဲကအရက်ခွက်များကို အဖွဲ့ဝင်၎ယောက်လုံး မော့သောက်လိုက်ကြသည်။
အရက်သောက်လိုက်သည့် အဖွဲ့သား၎ယောက်၏ပါးစပ်မှ သွေးများကျလာပြီး အတုံးအရုံး သေဆုံးသွားကြသည်။
ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကတော့ အောင်မြင်သူတစ်ဦးဟန်ဖြင့် သင်္ဘောဦးပိုင်းသို့ဆက်သွား သည်။ လက်ထဲတွင်တော့ ကျည်အပြည့်ဖြည့်ထားသည့်ပစ္စတိုတစ်လက်။
ခြေသံလုံလုံဖြင့် မာလိန်မှူးအနားသို့တိုးကပ်သွားပြီး သူ့နားထင်သို့သေနတ်ထောက်လိုက် သည်။ အံ့သြတုန်လှုပ်သွားသည့်မာလိန်မှူးဆီမှ ဘာစကားမှထွက်မလာခင် သေနတ်မောင်းကိုဆွဲညှစ် လိုက်သည်။
ထို့နောက်… သေဆုံးသွားသည့် တပည့်မာလိန်မှူးအလောင်းကိုကြည့်ရင်း သွေးအေးစွာ ပြောသည်။
“ဒီလောက်ဒေါ်လာဘီလီယံချီတန်တဲ့ပစ္စည်းကို ရာထူးတက်ရုံလောက်ဆိုတဲ့မက်လုံးလေး နဲ့ ငါကကျေနပ်ရမှာလားကွာ”
သင်္ဘောလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလိုက်သည်။ ဆယ်လ်မန်ကိုဝယ်မည့် သူဌေးကြီးဆီသို့ သူအခုလာနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဂြိုလ်တုဖုန်းနှင့်သတင်းလှမ်းပို့လိုက်သည်။
သူ့အနာဂတ်လမ်းကတော့ ချောမွေ့နေလေပြီ။ ငွေများရလာလျှင် စံအိမ်တစ်ခုဝယ်မည်။ ငါးမျှားရန်ရေကန်တစ်ခုရှိရမည်။ ရေကူးကန်တစ်ခု၊ ကိုယ်ပိုင်ဂေါ့ဖ်ကွင်းတစ်ခု။
စဉ်းစားရင်း စဉ်းစားရင်း သူခံတွင်းချဉ်လာသဖြင့် အိတ်ကပ်ထဲရှိ ဆေးပြင်းလိပ်ဘူးထဲမှ ဆေးပြင်းလိပ်တစ်လိပ်ထုတ်ပြီး ငုံလိုက်သည်။
သူ့ပါးစပ်ထဲရောက်လာသည့်ဆေးပြင်းလိပ်က ခါတိုင်းနှင့်မတူပဲ အခုမှအရသာတစ်မျိုးဖြစ် နေသည်။ သူကြောက်လန့်တကြားနှင့် ထွေးထုတ်လိုက်သော်လည်း နောက်ကျသွားခဲ့လေပြီ။
မောင်းသူမဲ့နေသည့် သင်္ဘောတစ်စင်း ကျောက်ဆောင်များဆီသို့ အရှိန်ပြင်းစွာ ခုတ် မောင်းသွားသည်။
“နိုင်ငံတကာမှအလိုရှိလျက်ရှိပြီး ပညာရှင်မျိုးစုံတို့အကြား အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်နေသည့် ဆယ်လ်မန်သည် ဘာမန်နိုင်ငံ၏ ကန်းရိုးတန်းတစ်နေရာတွင် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း။
ထိုဆယ်လ်မန်အားရှာဖွေရန် ဘာမန်နိုင်ငံအစိုးရသို့ နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများ ပေးအပ် လျက်ရှိပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိသူများကိုလည်း ထိုက်တန်စွာဆုချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါ ကြောင်း။
ဘူမိဗေဒသမားတို့အဆိုအရ ထိုဆယ်လ်မန်အမည်ရှိပစ္စည်းမှာ စက်ဝိုင်းပုံအဖြူရောင် ကျောက်ပြားတစ်ပြားဖြစ်ပြီး ခန့်မှန်းခြေထုသုံးလက်မ၊ အချင်းတစ်ပေခန့် ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။”
ပူပွငျးလှနျးလှသောမွပွေငျထကျတှငျတော့ ကြောကျတငျးပုတျကွီးတဈခု ကိုငျစှဲလာသော ကြောကျခတျေလူသားတဈယောကျ…။
မောပနျးလှနျးသဖွငျ့ သဈပငျအရိပျအောကျတှငျသူထိုငျခလြိုကျသညျ။ ဒီနမှေ့ သားကောငျ ကလညျးမရ။ ဗိုကျကလဲ တကြုတျကြုတျနှငျ့ဆာလှလပွေီ။
ဗိုကျဆာဆာနှငျ့ ဟိုကွညျ့ဒီကွညျ့လုပျနစေဥျ သူ့စိတျအစဥျကို အရာဝတ်ထုတဈခုက ဖမျးစား လိုကျသညျ။
စိတျဝငျတစားနှငျ့သှားကိုငျကွညျ့သညျ။ အသားကတော့ သူတို့ကိုငျစှဲသညျ့ လကျနကျမြား လိုပငျမာသညျ။ နပေူထဲမှာမို့ပူကြှတျနသေညျ။ မကျြနှာပွငျနှဈဖကျပါပွီး နှဈဖကျလုံးတှငျ ဘာအရေး အကွောငျးမှရှိမနေ။ ပကတိပွောငျခြောနပွေီး ပွငျညီဖွဈနသေညျ။
သို့သျောသူထှထှေထေူးထူးစဥျးစားမနနေိုငျ။ နိုးကတညျးက ဘာတဈခုမှမစားရသေးသဖွငျ့ ရရာကိုပဲစားတော့မညျဟု သူဆုံးဖွတျလိုကျသညျ။
ထို့နောကျ သူဗိုကျဆာဆာနှငျ့ကိုကျလိုကျသညျ။ မရ။ အသားကမာလှနျးသညျ။ စိတျညဈ ညဈနှငျ့ ဘေးဘီဝကွေ့ညျ့တော့ သူ့လကျစှဲတျောတငျးပုတျကိုတှသှေ့ားသညျ။
သူအဓိပ်ပါယျပါပါတဈခကျြပွုံးလိုကျပွီး သူ့တငျးပုတျကွီးကိုမကာ ထိုပွားပွားကောငျကို အား နှငျ့မာနျနှငျ့ထုခလြိုကျသညျ။ အရှိနျကအတျောပွငျးသညျမို့ သဈပငျပျေါကအသီးမြားတောငျကွှကေလြာ သညျ။
စိတျထဲတှငျလညျး မငျးဘာတတျနိုငျသေးလဲဟု ကွုံးဝါးမိလိုကျသညျ။ အားရကနြေပျစှာနှငျ့ အောကျကိုငုံ့ကွညျ့မိတော့ အထငျနှငျ့အမွငျကလှဲခသြေညျ။ ထိုပွားပွားကောငျကဘာမှမဖွဈ။ အကျရုံ လေးသာအကျသညျ။
သူစဥျးစားမရဖွဈသှားသညျ။ ယခငျကဆို သူ့တငျးပုတျနှငျ့ထုလိုကျလှငျြ သားကောငျတှေ အကုနျလုံးသကွေသညျ။ အခုဒီကောငျကမြှ သူ့တငျးပုတျကိုမဖွုံဆိုတော့ သူစဥျးစားမရဖွဈနသေညျ။
ဤမှထြူးဆနျးလှသော ထိုပွားပွားကောငျကို သူအသအေခြာကိုငျကွညျ့သညျ။ ကွညျ့ရငျး ကွညျ့ရငျး သူအတှေးတဈခုရလာသညျ။ တငျးပုတျနှငျ့မရလှငျြ စူးနှငျ့ထိုးမညျ။
ထိုအတှေးရရခွငျး သူအလငျြအမွနျပဲ အကောငျအထညျဖျောသညျ။ ကြောကျစူးတဈခုကို ယူပွီး ထိုပွားပွားကောငျကိုထိုးစိုကျလိုကျသညျ။
သူဒေါသထှကျထှကျဖွငျ့ ထိုပွားပွားကောငျကို စူးနှငျ့ခွဈသညျ။ ပွားပွားကောငျကိုယျပျေါ တှငျ ခွဈရာမြားဗလပှဖွဈသှားသညျ။ နောကျဆုံး ခွဈရုံတငျအားမရတော့သဖွငျ့ ပါးစပျနှငျ့ကိုကျသညျ။ အားရပါးရကိုကျသညျ။ ပါးစပျကလညျး “တဂူးဂူး၊တဂဲဂဲ” အသံမြားထှကျနသေညျ။
ထိုစဥျ…။ ဒေါကျခနဲအသံတဈခုကွားလိုကျပွီး သူ့ပါးစပျတှငျးတဈနရောက ပူခနဲခံစားလိုကျ ရသညျ။ ပါးစပျတှငျးမှ သှေးမြားစိမျ့ထှကျလာသညျ။
နောကျဆုံးတော့ သူလကျလြှော့လိုကျသညျ။ ခွဈရာမြား၊ ကိုကျရာမြား၊ အကျရာမြားဗလပှ ဖွဈနသေညျ့ ထိုကြောကျပွားဝိုငျးလေးကို မွကွေီးပျေါတှငျပဈခထြားခဲ့သညျ။
ခရဈနှဈ၃၀၁၅၊ အောကျတိုဘာလ ၁၁ရကျ…။
ဘာမနျနိုငျငံ၏ သမ်မတအိမျတျောတှငျ လြှို့ဝှကျအစညျးအဝေးတဈခု ကငျြးပနကွေသညျ။
“အခုလိုမြိုး ကြှနျတျောတို့လြှို့ဝှကျတှဆေုံ့ရခွငျးကတော့ သုတဘဏ်ဍာတိုကျတဈခုအဖွဈ တဈကမ်ာဘလုံးကသတျမှတျပွီး အသညျးအသနျလိုခငျြနကွေတဲ့ဆယျလျမနျဟာ အခုဆိုကြုပျတို့နိုငျငံထဲ မှာရှိနပွေီဆိုတာ ပွောဖို့အတှကျပဲဖွဈပါတယျ”
“ဗြာ…အဲ့…အဲဒါ တဈကယျပဲလား သမ်မတကွီး”
“ဟုတျပါတယျ…။ ဒီအကွောငျးကိုတော့ ထောကျလှမျးရေးအရာရှိက ဆကျလကျတငျပွပါ လိမျ့မယျ”‘
သမ်မတကွီးစကားဆုံသှားခြိနျမှာတော့ စားပှဲခုံ၏ထောငျ့စှနျးတှငျထိုငျနသေညျ့ လူတဈဦးက မတျတပျထရပျပွီး သူ့ကိုယျသူမိတျဆကျသညျ။
“အားလုံးပဲမင်ျဂလာပါ။ ကြှနျတျောကတော့ သမ်မတကွီးပွောသှားတဲ့ ထောကျလှမျးရေး အ ရာရှိပါ။
ဒီဆယျလျမနျဟာ လှနျခဲ့တဲ့တဈပါတျလောကျတညျးက ကြှနျတျောတို့နိုငျငံထဲ ရောကျနခေဲ့ တာလို့ ခနျ့မှနျးမိပါတယျ။ ဒီပစ်စညျးရဲ့ အကွမျးဖငျြးစြေးကတော့ ဘာမနျဒျေါလာဘီလီယံ၁၀၀၀လို့ သိ ရပါတယျ။ ဒီပစ်စညျးဟာ အလှနျကိုအရေးကွီးတာမို့ ကြှနျတေျာ့လကျအောကျက အယုံကွညျရဆုံးနဲ့ အတျောဆုံးတပျဖှဲ့ကို ဒီပစ်စညျးယူဖို့အတှကျ တာဝနျပေးထားပါတယျ”
အရာရှိစကားဆုံးသှားခြိနျမှာတော့ အစညျးအဝေးပှဲသို့တကျရောကျလာကွသညျ့ ပညာရှငျ မြားအားလုံးက လကျခုပျဝိုငျးတီးကွသညျ။
လကျခုပျသံစဲမှ သမ်မတက စကားဆကျပွောသညျ။
“ကဲ…အခုဆို ဒီပစ်စညျးဟာ ကြှနျတျောတို့လကျထဲရောကျပွီလို့ တဈဝကျတော့ပွောလို့ရပွီ ပေါ့ဗြာ။ ဒါပမေယျ့ ဒီပစ်စညျးအကွောငျးကို ဂဃနဏပိုသိခငျြတာမို့ ပညာရှငျမြားက ကိုယျသနျရာသနျ ရာ ရှငျးပွကွပါခငျဗြာ”
“ဟုတျကဲ့ပါသမ်မတခငျဗြာ။ ကြှနျတျောတို့ရှေးဟောငျးသုတသေနနယျပယျမှာ ဒီပစ်စညျးရေ ပနျးစားရခွငျးကတော့ ဒီပစ်စညျးပျေါက အမှတျအသားတှဟော ပြောကျဆုံးနတေဲ့ရတနာသိုကျဆီ သှားဖို့ သဲလှနျစပေးထားတဲ့ မွပေုံတဈခုလို့ပညာရှငျတှယေူဆကွလို့ပါခငျဗြ။ အမှတျအသားတှထေဲ မှာလညျး သဈပငျတှေ၊ စမျးခြောငျးတှေ၊ တောငျစဥျတှပေါဝငျနပေါတယျ။”
သူလလေ့ာမိသမှပြွောပွအပွီးမှာတော့ ရှေးဟောငျးသုတသေနပညာရှငျ ထိုငျသှားသညျ။
“ဒီပစ်စညျးဟာ ဒွပျစငျအသဈတဈခုဖနျတီးနိုငျဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံးလမျးညှနျတဈခုလို့ ကြှနျတျောတို့ကတော့ယူဆပါတယျ။ ရိုးရာအချေါအဝျေါအရတော့ ရှဖွေဈငှဖွေဈဓာတျလုံးဖနျတီးဖို့ပေါ့ လေ။”
“ခုလကျရှိကြှနျတျောတို့ အသုံးပွုနတေဲ့နြူကလီးယားနညျးပညာဟာ လုံးဝပွညျ့စုံတဲ့အဆငျ့ မဟုတျသေးပါဘူးသမ်မတခငျဗြား……။ ဒါပမေယျ့ ဒီပစ်စညျးအပျေါက လမျးညှနျခကျြလို့ယူဆရတာတှနေဲ့ ခြိနျထိုးပွီးဖနျတီးနိုငျရငျတော့ နြူကလီးယားမြိုးဆကျသဈတဈမြိုးကို ကြှနျတျောတို့တတှေ ဖနျတီးနိုငျကွ မှာပါ”
“ဒီဆယျလျမနျဆိုတဲ့ ပစ်စညျးပျေါက သငေ်ျကတတှဟော သာမနျမဟုတျပဲ လူတှနေဲ့ တိရစ်ာဆနျတှေ အပွနျအလှနျဆကျသှယျနိုငျတဲ့ ဘာသာစကားကိုရေးထှငျးထားတယျလို့ ကြှနျတျော တို့ကတော့ ထငျပါတယျ”
ပညာရှငျအားလုံး ၄ငျးတို့၏ထငျမွငျခကျြမြားကို ထုတျဖျောပွီးသှားခြိနျမှာတော့ သမ်မတက အစညျးအဝေးကို ရုတျသိမျးလိုကျလသေညျ။
ခရဈနှဈ၃၀၁၅၊ အောကျတိုဘာလ ၁၃ရကျ…။
ဘာမနျနိုငျငံရှိ ကမ်ာဘ့အကောငျးဆုံး Apexဟိုတယျ၏ အခနျးနံပါတျ၃၁၃…။
မကျြနှာပျေါတှငျ ပါးသိုငျးမှေးမြားထူထပျစှာပေါကျနသေညျ့လူတဈဦး ကနြေပျအားရစှာပွုံး နသေညျ။ ကြဥျးမွောငျးလှသော မကျြလုံးအစုံကတော့ သူသညျသှေးအေးရကျစကျသူတဈဦးဖွဈသညျ ဟု အတိအကဝြနျခံနကွေသညျ။
“ဒီလောကမှာ ဦးသူစားကွေးပဲကှ။ အခု ငါဦးသှားပွီမို့ ငါစားအလှညျ့ပေါ့သူငယျခငျြးရာ”
ထိုသူကောကျကဈြစှာပွုံးရငျး သှေးအိုငျထဲတှငျ လဲကသြဆေုံးနသေညျ့ သူ့သူငယျခငျြးကို ပွောလိုကျသညျ။
တဈဆကျတညျးမှာပငျ သူ့ညာဖကျလကျတှငျကိုငျထားသညျ့ အထုပျတဈထုပျကို အားရစှာ ကွညျ့လိုကျပွီး ရခြေိုးခနျးထဲမှလှညျ့ထှကျလာခဲ့သညျ။
“ကြှနျတျော ဟိုတယျဝနျထမျးပါ။ အကို့အခနျးကို နညျးနညျးစဈဆေးစရာလေးရှိလို့ပါ။”
ဘယျလိုပဲဟိုတယျဝနျထမျးလို့ပွောပမေယျ့ သူယုံကွညျမှုမရှိ။ အရငျဆုံးreceptionကိုတော့ လှမျးမေးရမညျ။
“ကြှနျတျောက အခနျးနံပါတျ၃၁၃ကပါ။ တဈခုခုစဈဆေးဖို့မြား ကြှနျတျော့အခနျးဆီကို လူလှတျထားသလားသိခငျြလို့ပါ။”
“ဟုတျကဲ့ပါလူကွီးမငျးရှငျ့။ အရေးပျေါမီးငွှိမျးစနဈအတှကျ လူကွီးမငျးအခနျးကိုစဈဆေးဖို့ ဝနျထမျးတဈဦးလှတျထားပါတယျရှငျ။ ဒီအတှကျကွောငျ့ လူကွီမငျးစိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈသှား…”
သူreceptionကပွောသောစကားတောငျ ဆုံးအောငျမစောငျ့တော့ပဲ ဖုနျးခပြဈလိုကျသညျ။ ဘာပဲပွောပွော သူ့ရနျသူတှမေဟုတျသညျ့အတှကျ စိတျတော့ပေါ့သှားလသေညျ။
သူအကွောငျးပွနျလိုကျသဖွငျ့ ဟိုတယျဝနျထမျးဆိုသူက သူ့အခနျးထဲသို့ဝငျလာသညျ။
ထိုသူက တံခါးကိုအသာအယာစပေိ့တျလိုကျပွီး ဒီဖကျပွနျအလှညျ့တှငျတော့ အသံတိတျ ကိရိယာ တပျထားသညျ့ ပစ်စတိုတဈလကျက လကျထဲပါလာပွီး ပါးသိုငျးမှေးနှငျ့လူကိုခြိနျလိုကျသညျ။
သနေတျနှငျ့ခြိနျထားတာတှတေ့ော့ ပါးသိုငျးမှေးနှငျ့လူ အတျောကိုတုနျလှုပျသှားသညျ။
“မငျး…မငျး ဘယျသူလဲ။ ဟို… ဟို… ဟိုတယျဝနျထမျးဆို”
“ကြှနျတျောလဲခငျဗြားလိုပါပဲ။ ဆယျလျမနျနောကျကိုလိုကျနတေဲ့သူပေါ့။ ဟိုတယျဝနျထမျး ကတော့ အိမျသာထဲမှာ ကြှနျတျောသိပျထားခဲ့ပါတယျ”
သှေးအေးတညျငွိမျသော ထိုသူ၏စကားမြားအောကျတှငျ ပါးသိုငျးမှေးနှငျ့လူ အတျော့ကို ခွောကျခွားနလေသေညျ။
“ကဲ…အခြိနျမရှိဘူးဗြာ။ ခငျဗြားလကျထဲကဆယျလျမနျ ကြှနျတျော့ကိုပေးတော့”
ထိုစကားကွားတော့ နဂိုကထကျ သူပိုတုနျလှုပျသှားသညျ။ ဒျေါလာဘီလီယံခြီတနျသညျ့ အတှကျ သူ့သူငယျခငျြးအရငျးကွီးကိုတောငျ သတျပွီးယူထားခဲ့သညျ့အရာကို ယခုလိုမြိုး တဈပါးသူ၏ လကျထဲ လှဲပေးရမညျဆိုတော့ သူနှမွောလှသညျ။
သို့သျော အသကျကတော့ ပိုအဖိုးတနျသဖွငျ့ မပေးခငျြပေးခငျြနှငျ့ပေးလိုကျသညျ။
ဆဲလျမနျဆိုသညျ့အရာကို သူဖှငျ့ဖောကျကွညျ့သညျ။ အစဈဖွဈကွောငျးသခြောသညျနှငျ့ သူတဈခကျြပွုံးရငျး ပါးသိုငျးမှေးနှငျ့လူကိုပွောသညျ။
“ခငျဗြားကကြှနျတျော့ကို ဒီလကျဆောငျပေးတယျဆိုတော့ ကြှနျတျောကလညျးခငျဗြားကို လကျဆောငျတဈခုပွနျပေးရမှာပေါ့။
သူလကျညှိုးလေးကိုနှဈခါလောကျကှေးလိုကျသညျ။ ဒုတျဆိုသညျ့အသံကလဲ နှဈခကျြမညျ သှားသညျ။ ပါးသိုငျးမှေးနှငျ့လူ၏ရငျဘတျတှငျတော့ လကျဆောငျရထားသညျ့ ကညျြဖူးနှဈခု…။
ဟိုတယျထဲမှထှကျလိုကျသညျနှငျ့ အခြိနျးအခကျြလုပျထားသညျ့အတိုငျး သူ့သူငယျခငျြး၏ ကားလေးရောကျလာသညျ။
ကားထဲရောကျရောကျခငျြး လှမျးမေးသညျ့သူငယျခငျြးကိုပွုံးပွရငျး လကျထဲကဆယျလျမနျ ကို သူတှအေ့ောငျမွောကျပွလိုကျသညျ။
ကယျြလောငျလှသညျ့ရယျသံမြားကိုသယျဆောငျပွီး ပွိုငျကားလေးတဈစီး ဟိုတယျApexမှ ထှကျခှာသှားလသေညျ။
အရှိနျအနညျးငယျတငျပွီးမောငျးလာသော သူတို့ပွိုငျကားကို အရှိနျလြှော့ခလြိုကျရသညျ။
မလြှော့ခြ၍မရ။ ရှနေ့ားမှာကားတိုကျမှုဖွဈသဖွငျ့ လမျးပိတျနသေညျ။ ဟိုးခပျလှမျးလှမျးက ယာဥျထိနျးရဲတဈဦးကတော့ ကားသမားနှဈဦးကို တတျနိုငျသလောကျဖွရှေငျးပေးနသေညျ။
ကားစကျကို လုံးဝသတျလိုကျသညျ။ လမျးကလဲ ကြျောတကျဖို့အဆငျမပွသေဖွငျ့ သူတို့ ရှငျးပွီးသညျ့အထိသာစောငျ့ရတော့မညျ။
ထိုအခိုကျ ကားမှနျကှဲသှားပွီး သူငယျခငျြးဖွဈသူဇကျကြိုးကသြှားသညျ။
ရုတျတရကျမို့ ဘာဖွဈမှနျးမသိသဖွငျ့ သူငယျခငျြးဖကျသို့အလှညျ့။ သူ့ဖကျအခွမျးက ကား မှနျထပျကှဲသှားသညျ။ လညျပငျးတှငျလညျးပူခနဲခံစားလိုကျရပွီး သှေးမြားကဒလဟောထှကျလာသညျ။
ရနျသူတှမှေနျး သူနောကျကစြှာသိလိုကျသညျ။ နောကျဆုံးသိလိုကျရသညျကတော့ သူတို့ ရှိရာသို့ ပွုံးပွီးလြှောကျလာသညျ့ ယာဥျထိနျးရဲနှငျ့ယာဥျတိုကျမှုဖွဈသူနှဈဦး…။
“ကဲ…တို့တှဒေီစဈဆငျရေးတော့အောငျပွီ။ ပစ်စညျးကိုအပျပွီး ရာထူးတကျဖို့ပဲ စောငျ့နရေ တော့မယျ”
ခေါငျးဆောငျဖွဈသူက သူဝတျခဲ့သညျ့ ယာဥျထိနျးရဲအကြီကိုခြှတျပွီး သူ့အကြီကိုပွနျဝတျ နရေငျးပွောသညျ။
“ငါနဲ့အတူတူစဈဆငျရေးမှာပါဝငျပွီး ဟနျဆောငျရနျဖွဈခဲ့တဲ့ရဲဘျော၂ယောကျနဲ့ တိုကျ၁လုံး စီပျေါကနေ တာဝနျကခြေဲ့ကွတဲ့ စနိုကျပါရဲဘျော၂ယောကျတို့အတှကျ CHEER!!!”
ခှကျခငျြးတိုကျသံမြားဆူညံသှားပွီး လကျထဲကအရကျခှကျမြားကို အဖှဲ့ဝငျ၎ယောကျလုံး မော့သောကျလိုကျကွသညျ။
အရကျသောကျလိုကျသညျ့ အဖှဲ့သား၎ယောကျ၏ပါးစပျမှ သှေးမြားကလြာပွီး အတုံးအရုံး သဆေုံးသှားကွသညျ။
ခေါငျးဆောငျဖွဈသူကတော့ အောငျမွငျသူတဈဦးဟနျဖွငျ့ သငေ်ျဘာဦးပိုငျးသို့ဆကျသှား သညျ။ လကျထဲတှငျတော့ ကညျြအပွညျ့ဖွညျ့ထားသညျ့ပစ်စတိုတဈလကျ။
ခွသေံလုံလုံဖွငျ့ မာလိနျမှူးအနားသို့တိုးကပျသှားပွီး သူ့နားထငျသို့သနေတျထောကျလိုကျ သညျ။ အံ့သွတုနျလှုပျသှားသညျ့မာလိနျမှူးဆီမှ ဘာစကားမှထှကျမလာခငျ သနေတျမောငျးကိုဆှဲညှဈ လိုကျသညျ။
ထို့နောကျ… သဆေုံးသှားသညျ့ တပညျ့မာလိနျမှူးအလောငျးကိုကွညျ့ရငျး သှေးအေးစှာ ပွောသညျ။
“ဒီလောကျဒျေါလာဘီလီယံခြီတနျတဲ့ပစ်စညျးကို ရာထူးတကျရုံလောကျဆိုတဲ့မကျလုံးလေး နဲ့ ငါကကနြေပျရမှာလားကှာ”
သငေ်ျဘာလမျးကွောငျးကိုပွောငျးလိုကျသညျ။ ဆယျလျမနျကိုဝယျမညျ့ သူဌေးကွီးဆီသို့ သူအခုလာနပွေီဖွဈတဲ့အကွောငျး ဂွိုလျတုဖုနျးနှငျ့သတငျးလှမျးပို့လိုကျသညျ။
သူ့အနာဂတျလမျးကတော့ ခြောမှနေ့လေပွေီ။ ငှမြေားရလာလှငျြ စံအိမျတဈခုဝယျမညျ။ ငါးမြှားရနျရကေနျတဈခုရှိရမညျ။ ရကေူးကနျတဈခု၊ ကိုယျပိုငျဂေါ့ဖျကှငျးတဈခု။
စဥျးစားရငျး စဥျးစားရငျး သူခံတှငျးခြဥျလာသဖွငျ့ အိတျကပျထဲရှိ ဆေးပွငျးလိပျဘူးထဲမှ ဆေးပွငျးလိပျတဈလိပျထုတျပွီး ငုံလိုကျသညျ။
သူ့ပါးစပျထဲရောကျလာသညျ့ဆေးပွငျးလိပျက ခါတိုငျးနှငျ့မတူပဲ အခုမှအရသာတဈမြိုးဖွဈ နသေညျ။ သူကွောကျလနျ့တကွားနှငျ့ ထှေးထုတျလိုကျသျောလညျး နောကျကသြှားခဲ့လပွေီ။
မောငျးသူမဲ့နသေညျ့ သငေ်ျဘာတဈစငျး ကြောကျဆောငျမြားဆီသို့ အရှိနျပွငျးစှာ ခုတျ မောငျးသှားသညျ။
“နိုငျငံတကာမှအလိုရှိလကျြရှိပွီး ပညာရှငျမြိုးစုံတို့အကွား အငွငျးပှားဖှယျရာဖွဈနသေညျ့ ဆယျလျမနျသညျ ဘာမနျနိုငျငံ၏ ကနျးရိုးတနျးတဈနရောတှငျ ပြောကျဆုံးသှားခဲ့ကွောငျး။
ထိုဆယျလျမနျအားရှာဖှရေနျ ဘာမနျနိုငျငံအစိုးရသို့ နိုငျငံတကာမှအကူအညီမြား ပေးအပျ လကျြရှိပွီး အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ရှာဖှတှေရှေိ့သူမြားကိုလညျး ထိုကျတနျစှာဆုခြီးမွှငျ့မညျဖွဈပါ ကွောငျး။
ဘူမိဗဒေသမားတို့အဆိုအရ ထိုဆယျလျမနျအမညျရှိပစ်စညျးမှာ စကျဝိုငျးပုံအဖွူရောငျ ကြောကျပွားတဈပွားဖွဈပွီး ခနျ့မှနျးခွထေုသုံးလကျမ၊ အခငျြးတဈပခေနျ့ ရှိမညျဖွဈကွောငျးသိရသညျ။”
This entry was posted in ဝတ္ထုတို, အတွေးစာစုများ(ရသ) on July 8, 2015 by linyeikhtin.
← အိမ်ထောင်ပြုတာမိန်းကလေးတွေနစ်နာတယ် (အိမျထောငျပွုတာမိနျးကလေးတှနေဈနာတယျ) အိုဘယ့်…အနုပညာသည် (အိုဘယျ့…အနုပညာသညျ) →